Ndi mbu na ihe ozi itinye akwụkwọ na kọmputa maka ulo onunu na họtelu nke Afrika
Jumia Travel bụ oka ibe na Afrika na ihe gbasara itinye akwukwo maka I debe ọnọdụ na họtelu site na igwe ozi komputa nke mba uwa. Na enye gị onu ahịa kacha mma na ihe karịrị họtelu puku iri abụọ na Afrika, họtelu puku abụọ na Pakistan na ihe karịrị narị puku họtelu abụọ gba gburugburu ụwa nile.
Ọchịchọ na mmasi obi anyi bu iweta ulo onunu nile dịnụ na igwe komputa, iji mee ka ọ di mfe ma dikwa ọnụ ala maka itinye akwụkwọ I debe onu ulo na họtelu.
Na Jumia Travel, anyị nwere narị ọtụtụ ndi ọkachamara na oru ime njem ndi na akpoturu ndi ahịa anyị mgbe nile. Ulọ orụ anyi dị na Lagos (Nigeria), Accra (Ghana), Dakar (Senegal), Abidjan (Ivory Coast), Algiers (Algeria), Douala (Cameroon), Kampala (Uganda), Dar Es Salaam (Tanzania), Nairobi (Kenya), Addis Ababa (Ethiopia), Maputo (Mozambique), Karachi, Lahore na Islamabad (Pakistan), Porto (Portugal) na Paris (France).
Onu Ahịa Kachasi Nma
Onu ahịa kachasi nma na ọtụtụ puku nkwa nke azumahia
Tinyere Họtelu Puku Iri Abụọ
Ihe ndekota azumahia kachi ukwu na Afrika
Ntinye Akwụkwọ Maka Onuno Na Họtelu Na Otu Oge
Mfe, ozugbo na nchekwa
Ndi Isi Ahia Anyi
Africa Internet Group (AIG) bu ndi tọrọ ntọala Jumia Travel, site na enyem aka na nkwado nke MTN, AXA, Millicom na Roket Internet.
Ihunanya banyere Africa na ihe mgbasa ozi nke komputa na mba uwa anakpo (Internet), AIG na atu anya ịzụlite oru itumgbere ahia nke onwe ma na-eweta akuru ngwa na ndi okacha mara iji meka oganairu di mba Afrika.
AIG opekatampe di ugbu a na mba Afrika nile bu nke nwere ndị ọrụ karịrị narị puku atọ na ise. Ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ ha n'akụkụ Jumia Travel gụnyere Jumia, Kaymu, Hellofood, Carmudi, Lamudi, Zando, Lendico, na EasyTaxi.
Ji ihe karịrị otu nari na-eto n'ike n'ike na ihe dijitalụ (Igwe mgbasa ozi) atumatu gafee na mba ụwa
Tinyere ndi m rụkọ ọrụ ruru iri puku abụọ
Ndi ọkachamara na iwuu azụmahịa site na igwe komputa
Ndi kachasinu na ihe nnata ozi netwọk ekwe nti na Afrika
Di ugbu a na mba uwa iri abụọ na atọ
Ihe karịrị otu narị puku na iri madu asatọ debanyere aha ha
Ndi nwe Tigo ihe nnata ozi netwọk ekwe nti
Ihe karịrị iri nde madu isii debanyere aha ha
Di ugbu a na Africa na kwa obodo Latin America
Ulo oru insurance kacha ibu na Europe
Nke nwere ngaraba n'ime mba 59
Nwerekara ndi ahia nari nde
Anyi no ebe a i nye aka, e gbula oge i kpo anyi!
Dere anyi oziChatia ugbua